အကင်များအား ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် ဘယ်လို လုပ်စားရမလဲ..? by popolay.com
19 Mar 2020 6,475 Views
- အကင်များဟာ ကျန်းမာရေးနှင့် သိပ်ပြီးမညီညွှတ်ဘူးလို့ အားလုံးကသိထားကြသော်လည်း တော်တော်များများကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်စွာ စားသုံးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပူမနေပါနဲ့ အခုပဲ အကင်တွေကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Royalist Drugs : အကင်ရဲ့တူးသွားတဲ့နေရာတွေမှာ တွေ့ရပါတယ် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများစေပါတယ်။
2. Nitrate : တာရှည်ခံဆေးထည့်ထားတဲ့ အစားအစာတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ဝက်သားချဉ်၊ ဝက်/ ကြက်အူချောင်း၊
3. Nitrosamines : ကင်းမွန်ကင်၊ ပင်လယ်ငါးကင်တွေမှာတွေ့ရတတ်ပြီး အသည်းကင်ဆာ၊ အစာရေပြွန်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ တို့ကိုဖြစ်လာနိုင်ချေများပါတယ်။
4. PAHs, or polycyclic aromatic hydrocarbons : မီးတူးသွားတဲ့ဝက်သားကင်၊ ကြက်သားကင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အကင်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုစားရမလဲ
1. မီးကင်တဲ့အခါ ကင်တဲ့မီးသွေးခဲပေါ်ကျမယ့် အဆီအစက်ကလေးတွေ နည်းပါးအောင် အဆီမပါတဲ့ အသား ( သို့ ) အဆီတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မီးပေါ်ကို ဆီအကျ သက်သာအောင် ဖက်နဲ့ပက်ပြီးကင်လို့လည်းရပါတယ်၊ ဖက်နဲ့ကင်မယ်ဆိုရင် အသားက ဖက်နံ့လေးသင်းပြီး ပိုလို့တောင်ကောင်းပါတယ်။
2. ရိုးရိုးမီးဖိုပြီး အသုံးပြုတာထက် မီးသွေးကိုအသုံးပြုတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သေးငယ်ပြီး ကြေမွနေတဲ့ မီးသွေးခဲများကို အသုံးမပြုသင့်ပါ၊ အကယ်၍ ထင်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း မာတဲ့ ထင်းသားကိုအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
3. ကင်ပြီးသား အသားတွေကို တူးနေတဲ့နေရာတွေကို မစားပါနဲ့ ထိုနေရာများကို ဖယ်ပစ်လိုက်ပါ။
4. အသား၊ ငါး ကင်တဲ့ သံပြား( သို့ ) သံချောင်းဟာ အရမ်းကြီးမည်းနေပြီဆိုရင်လည်း အသုံးပြုရန်မသင့်တော့ပါ။ အသစ်တစ်ခုပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။
5. အသီးအရွက် စုံစုံလင်လင်နဲ့ တွဲဖက်စားသုံးပေးပါ။
6. တကယ်လို့ အချဉ် (Sauce) က လုပ်ထားတာကြာနေပြီဆိုရင်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးတာကြောင့် အများကြီးမစားပါနဲ့။
7. အချိုရည်တို့ အအေးတို့ များများသောက်မယ့်အစား ရေကိုသာသောက်ပေးပါ။
8. ဆိုင်မှာသွားစားမယ်ဆိုရင် မီးပေါ်ဆီကျတဲ့ အကင်မျိုးတွေမရှိအောင် လျှပ်စစ်မီးဖို ( သို့ ) မီးခိုးမဲ့ မီးဖိုရှိတဲ့ ဆိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီး သွားစားသင့်ပါတယ်။
9. ဘေးကင်းအန္တရာယ်ရှင်းပြီး စိတ်ချလက်ချစားသောက်ရန်အတွက် Clean Food Good Taste ထောက်ခံချက်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေကိုပဲ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်
10. အဝစားဘူဖေးဆိုင်ဆိုပြီး အတင်းဗိုက်ပြည့်လွန်းအောင်လည်းမစားသင့်ပါကိုယ်စားနိုင်သလောက် ဗိုက်ပြည့်ရုံသာစားပါ။
ဆီးချိုသမားများ၊ သွေးအတွင်းအဆီများသူများ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းသူများ စတဲ့ ရောဂါအခံရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲ စားသုံးသင့်ပါတယ် အကင်စာတွေ မကြာခဏမစားသင့်ပါ။ အစာအာဟာရအုပ်စု ၅ အုပ်စုရရှိအောင် အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို မျှတစုံလင်စွာ စားပေးသင့်ပါတယ်။